Akhriso khudbadda Madaxweynaha Soomaaliya ee furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Golaha Shacabka – Kalfadhi
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa furay Kalfadhiga 5aad Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya waxa uuna halkaasi ka jeediyay khudbad dheer uu kaga hadlay xaaladda Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka hadlay arimo ay kamid yihiin amaanka, dagaalka Dowladda iyo Al-shabaab, doorashooyinka Maamul Gobaleedyada, isfahanka DF-ka Soomaaliya iyo Maamul Gobaledyada, Siyaasadad arimaha dibadda iyo qodobo kale oo muhiim ah.
Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa marka hore u tacsiyay dhamaan dadkii ku dhintay weeraradii iyo qaraxyadii ay Al-shabaab mudooyinkaan ka fuliyeen magaalada Muqdisho, waxa uuna dalbaday in amniga qof kasta ay ka shaqayso.
“Naxariistii Alle ayaa u rajeynayaa dhamaan dadkii ku dhintay weeraradii Al-shabaab ee ka dhacay dalka, Wasiiradii iyo dadkii kalaba aan u ducayno” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo. “dalka waxa uu ku jiraa xaalad dagaal mudo 10 sano, waa in qof kasta ka qayb qaataa sugidda amniga iyo la dagaalanka Al-shabaab” ayuu yiri Maxamed C/llaahi Farmaajo Madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dagaalka uu leeyahay dhibaatooyin badan oo di dhigi kara guulo badan oo la gaari lahaa balse waxa uu sheegay in waajib ay tahay difaaca dadka iyo dalka.
“Dagaalka dhaqaalaha ayuu hoose u dhigaa, waxa uu leeyahay dhimasho iyo dhaawac, waxa uu leeyahay bur-bur iyo saamayn ballaran, balse ma joojin doono dagaalka dalkana waan badbaadin doonaa” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo
Arimaha Ciidamada ayuu sheegay in Xukuumadda Soomaaliya ay ka sameysay guulo wanaagsan DF-kana ay ku dadaali doonto sidii loo bixin lahaa dhamaan xuquuqda Ciidamada iyo Shaqaalaha Dowladda Soomaaliya. “Xukuumadda waxbadan ayey ka qabatay arimaha Ciidamada waana ku amaanayaa waxaana ballan qaadayaa in Xuquuqda Ciidanka Soomaaliyeed aan bixin doono shuruud la’aan balse haloo dulqaato dib u habeynta” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Madaxweynaha Soomaaliya.
Farmaajo ayaa sheegay in Dowladda Federaalka Sooamaliya ay ku guulaysatay qabashada doorashooyinkii ka dhacay maamulada Puntland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya, hadana ay u diyaar garoobayaan doorashooyin sanadkaan ka dhaca Galmudug iyo Jubbaland.
“Waxaan ku guulaysanay in doorasho waqtigeeda ku beegan laga qabto K/Galbeed iyo Puntland, hadana waxaan u diyaar garoobaynaa doorashooyinka Galmudug iyo Jubbaland” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlayay Munaasbaddii lagu furay Kalfadhiga 5aad ee Golaha Shacabka.
Siyaasadda arimaha dibadda ayuu sheegay in Soomaaliya ay guulo badan ka gaartay, gaar ahaan arimaha isbadalka geeska Africa iyo Siyaasadda kale ee dibadda. “Siyaasadda arimaha dibadda waxay ku dhisantahay dan guud, wax wada qabsi, is ixtiraam” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya.
“Kalfadhigaan 5aad waxa uu ku soo aadayaa iyadoo ay heshiis yihiin DF-ka Soomaaliya iyo maamul Gobaleedyada, waxaana ku dhawaaqayaa in uu noo furan yahay Kalfadhiga 5aad” ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Madaxweynaha Soomaaliya.